Disiki | Tenga Bhuruu, Tsvuku, Violet, Green Laser Pointer - Lasers-Pointers.com
YEMAHARA SHIP ORDER + 99 € | CODE: FREESHIP
VANOBUDA MAHARA VANOTI VANOTA
GADZIRA VANOTA VANYENGA
VIOLET VANOTI PASI VANOTAURA
RED LASERS VANYENGA
ACCESORies LASERS VANYENGA
Aya maGeneral Mamiriro Echibvumirano (pano maGeneral Mamiriro ezvinhu) anotonga matanho ekutenga nekutengesa zvigadzirwa zvinopihwa neLasers-Pointers.com (pano Lasers-Pointers.com) mukatalog inowanikwa pawebsite yayo www.Lasers-Pointers.com.
The General Mamiriro anosunga Lasers-Pointers.com uye mutengi (Mutengi), achivapa nhevedzano yekodzero uye zvisungo, kubva panguva iyo iyo yekupedzisira inogadzira uye inogamuchira kuraira kuburikidza peji yambotaurwa. Ivo vanosungirwa uye vane ruzivo nemaviri mapato, saka kubvuma kwavo kana vachinyoresa sevatengi kwakakosha kuti vakwanise kuramisa kodhi. Naizvozvo, Mutengi anofanira kuverenga mamiriro aya nokungwarira.
Musoro wezvikamu zvakasiyana-siyana unongodzidzisa, uye hauzoiti, unokodzera kana kuwedzera kududzirwa kweZvino Zvigaro.
Iyi General Mamiriro ezvinhu ichagadziriswa nezvakapihwa mumatare ezvino zvemirairo.
1. Mitezo inobatanidzwa
Zita: Luis Corraliza Sanchez
Akanyoreswa Hofisi: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Toledo
Mutengi achanzi kune chero mushandisi weWebhu www.Lasers-Pointers.com iwe unoisa iyo yekuraira uye kugamuchirwa kwayo panguva imwecheteyo pakupera kwayo.
Mutengi anofanira kunyoresa zvakadaro uye vape data rinotevera kuitira kuti vakwanise kuisa rondedzero: zita uye surname kana zita rekambani, CIF / NIF, kero yeinvoice, kero yekutumira, nhamba yefoni yekufonera uye email yekutaurirana. Panguva ino, iwe unofanirwa kugamuchira idzi General Mamiriro.
Iyi data inopihwa neMutengi ichabatwa zvinoenderana neMitemo yekushandisa yewebhu (chikamu "Chiziviso cheMutemo")
2. Chinangwa chebvumirano
Kutengeswa kwezvakagadzirwa zvinopihwa neLasers-Pointers.com paWebhu yako neMutengi. Izvi ndizvo zvigadzirwa zve laser pointers zvakagadzirirwa kushandiswa kwakazvimirira.
3. Tender Kupa
Iyo inopihwa inogumira kune zvigadzirwa zvinowoneka paWebhu www.Lasers-Pointers.com, uye inoshanda pakutenga pasi rese.
Chigadzirwa chimwe nechimwe chine pepa re data chinoratidza hunyanzvi hwechigadzirwa, mhando, mhando, mafoto, mutengo wekutengesa neVAT unosanganisirwa muPeninsula neBalearic Islands, uye nguva yekuwanikwa kwechigadzirwa ichi mukutarisa kuburitsa uye kuburitsa kune Mutengi.
Mari yakakwana yekuraira ichazotumirwa kune Mutengi panguva yekugadzira yako odhi uye pamberi pekugamuchirwa kwakafanana.
Mutengo wezvigadzirwa ndiyo unoonekwa paWebhu panguva yekuisa iyo yekuraira.
4. Kubvuma kupiwa
Rinoitika panguva iyo Mutengi anopa kubvumirana pachena kune iyo kodhi yakaiswa. Pakutanga, mune imwe cheteyo yekunyoresa semutengi, mutengi anofanira kunge akagamuchira iyo General Mamiriro.
5. Mari yekubhadhara
Pane nzira nhatu dzekubhadhara mutengo wakarongedzerwa kune yega kodhi, kubva kwauri iwe yaunogona kusarudza Mutengi:
A) Kubhadhara pachine nguva mberi nekuendeswa kwebhangi:
Mutengi anofanira kugadzira bhangi kuendesa kuaccount yeLasers-Pointers.com kune iyo mutengo wemitengo yezvigadzirwa zveodha. Mukufambiswa kunofanirwa kuratidza nhamba yekuraira (iyo nhamba inopihwa pakarepo nehurongwa kana iyo yekuraira yapera); Pamusoro pekuratidzira semubatsirizve akafanana kuLasers-Pointers.com.
Iko kuchinjiswa kunofanirwa kuitwa mukati menguva yakareba yemazuva gumi kubva pakupera kwemirairo kuenda kubhengi account ichaonekwa mushure mekutenga. Kana pasina humbowo wekubhadhara mukati menguva iyoyo, iyo yekurairwa ichabviswa pakarepo.
B) Kubhadhara kuburikidza nekadhi:
Mutengi anogona kusarudza mubhadharo kuburikidza nekadhi rake, achizivikanwa mashandiro panguva yekuzikanwa kwekurairwa. Iko kubhadharwa nekadhi ndeye 100% chokwadi.
6. Kusvitswa kweMirairo
Nguva dzekutumira kwemirairo dzinoenderana nekuwanika kwechigadzirwa kana zvigadzirwa izvo zvinoita ivo, kuwanikwa kunoratidzwa mumabhagi ezvigadzirwa zvega zvega mune yekodhi yeWebhu www.Lasers-Pointers.com. Mazwi ekuwanikwa, nechinangwa chekuti computa inguva yekutumirwa kwemirairo, ichave ayo anoonekwa achishambadzirwa pane peji iyo nguva iyo oda yaiswa nemutengi.
Mune akadaira akarongeka mune yekubhadhara nzira pamberi, zvakare ichaverengerwa kuverengera kwekutumira mafirifitifomu chiratidzo chekuona kwekubhadharwa kweMutengi nekutumira kubhengi kana mari inowanikwa mubhangi account Inoratidzwa neLasers- Akashop.com.
Nekudaro, nguva ino yekuwanikwa inogona kuve yakagadziriswa mumamiriro ezvinhu akafanana panguva imwechete yeiyo chigadzirwa kana zvigadzirwa zvinotungamira kumagumo echitoro chechigadzirwa. Iyo yekutsva iyo nguva ichave inoratidzwa kune Mutengi munguva pfupi inogona kuitika. Kana kuguma kwemasheya kuri kwechokwadi, Mutengi acharairwa kusarudza pakati pekusarudza chigadzirwa kunze kwechimiro chakafanana uye mutengo wakafanana nechigadzirwa chakatengeswa, kana kudzima kodha yako, uchidzosera mari yakabhadharwa pamberi penyaya yemirairo ine mwero. Kubhadhara kumberi.
Kunonoka mukutakura kwemazuva anopfuura gumi zvichienderana neshoko rekuwanika, kunonoka kwakanangana neLasers-Pointers.com, kuchapa mutengi kubvumidzwa kweodhisheni yake kana akadaro achiratidzira nekunyora ne email kune kero info @ lasers-poers. com Uye, pazvinoshanda, mari yakabhadharwa kare, uye pasina chirevo chekukuvara, zvazvino kana remangwana, zvakananga kana zvisina kunanga.
Nguva dzekutakura dzinoenderana nerudzi rwekutumirwa kusarudzwa nemutengi, ichaonekwa panguva yekutenga. Aya mazwi anogara achifungidzirwa uye hapana panguva inishuwarenzi, saka haazove chikonzero chakakwana chekurambwa kwepakeji kana kudzimwa kwekutenga, mutengi anonzwisisa uye anotora kubvuma kwake pamwe nekubvunza kwezvekushandisa kwazvakaitika izvo zvandakagadzira. kana isina kupedzisa kutenga nechikonzero ichi.
Orders isina kuendeswa kune Mutengi mukati memazuva manomwe ekutumirwa nekuda kwezvikonzero zvisina kukodzera kuLasers-Pointers.com ichadzoserwa kumutengesi, iyo yekurairwa ichidzimwa kune zvese zvinangwa, ichidzoserwa kuMutengi, kana iripo, mari inobhadharwa mukati kufambira mberi, uye pasina chero chirevo chekukuvadza, zvazvino kana remangwana, zvakananga kana zvisina kunanga.
Iko kutumira kuchaitwa pasuo nesuo mukero yekutumira inoratidzwa mune yekuraira kutumira data. Iyo inotevera yekuchinjisa kero iyi inogona kuburitsa akateedzana yemabhadharo ayo anotakurwa neMutengi.
Mairairo anozotumirwa nekambani yekutakura mune kero yekutumira inoratidzwa neMutengi uye munhu akagadziriswa seanogamuchira akafanana. Ruzivo urwu ruchabatanidzwa mune inozivisa yekutumira yekambani yekutakura, iyo icharatidzawo huwandu hwemapaketi ekutakura, huremu hwese, nhamba yekuraira uye kudzorera (chete mune zviitiko zvemirairo yakaitwa nenzira yekubhadhara inopesana nekudzorera) .
Kununurwa kwezvigadzirwa zvakawandisa kana zvakawandisa, kana zvezvigadzirwa zvinopa kunetseka mukutakura, zvichaunzwa padondo rekero yakaratidzwa.
Pamusoro pezita rekutumira, invoice yekutenga inozotumirwa kumutengi nekodha imwe neimwe, ne e-mail.
Kana iyo invoice isipo, Mutengi anogona kuikumbira kuburikidza ne-e-mail kune kero info@lasers-pointers.com, ichiratidza zita remuridzi weinvoice nenhamba yekuraira, uye inotumirwa kwauri zvakare ne-e-mail.
Kana, panguva yekuzvitakura, iri pachena uye yakajeka kuoneka, pasina kukosha kwekubata kutakura kana kutumira kwechigadzirwa, icho chigadzirwa chine urema chinokonzerwa nekukuvara kwekuendesa kana, nenzira imwechete, Kukanganisa mukati zvinhu zvakatambirwa, Mutengi anofanira kuzvinyora mubhuku rekutumira uye kuzvizivisa kuLasers-Pointers.com (ne-e-mail yakanyorerwa kune kero info@lasers-pointers.com) mukati maawa makumi maviri nemana mushure mekutora iyo oda kuitira kukwanisa kukumbira kudzoka kwechiitiko chakakanganiswa uye pamwe nacho kutsiva neumwe mutsva kana kudzoserwa kwemutengo wakabhadharwa newawo.
Zvinokanganisa zvinogadzirwa mukufambisa izvo zvinongodiwa mushure mekusunungura chigadzirwa chinofanirwa kutaurwa mumaawa ekutanga makumi maviri nemana kubva pakutambirwa kweodhi nekodhi yemagetsi yakanyorerwa kune kero info@lasers-pointers.com, zvichiratidza kukuvara kunokonzerwa muchigadzirwa. Uye Kukumbira kudzoka kwechigadzirwa chakakanganiswa uye pamwe nacho kuchinjwe neimwe itsva kana kudzoserwa kwemutengo wakabhadharwa newawo.
7. Kuchenesa kwemirairo
Kungodzima chete kwemirairo kuchagamuchirwa kana yako odhi isati yatumirwa. Panguva iyo yanga yatove yakagadzirirwa asi isina kutumwa kana uchishuvira kuidzima iwe unogona kuzviita uchifungidzira kuti mutengo wegumi nemakumi mashanu unoderedzwa kubva pamari inenge yabhadharwa sekugadziriswa kwekuraira. Kana usati wabhadhara oda yako yekusarudza nzira yekubhadhara paunounza, iwe unofanirwa kubhadhara iyo 10 € kuburikidza nebhangi yakaiswa mune chero akaundi ayo achapihwa, kana iwe usingafungi uye kubvuma zvakadaro chikwereti neLasers-Pointers. com Ichatora matanho emutemo aanoona akakodzera kudzosera iyi huwandu. Kana yako oda yatotumirwa iwe unogona kutumira iyo zvakare mukati menguva yakareba yemazuva gumi nemana, asi mutengo wekutakura uchatakurwa nemutengi / mutengi, zvakare iwe unobvisirwa kubva kune iyo mari inodzoserwa 10 € pamutengo wekutumira pa chikamu chedu uye Kugadziriswa kweakarongeka.
Zvinosungirwa kumutengi / mutengi kuona kuti icho chakakumbirwa chigadzirwa ndicho chaunoda uye kana paine kusahadzika pamusoro pazvo ndizvo chisungo chemutengi / mutengi kuti abvunze Lasers-Pointers.com kubvunza nezvechigadzirwa pamberi pacho kutenga.
Kana izvo kutenga, zvakatotumirwa, zvichirambwa neanowana / mutengi nekuda kwezvikonzero zvisiri zveLasers-Pointers.com, anogona kutora mutero wekutumira kune unogamuchira zvakafanana, kumanikidza iwo wekupedzisira kubhadhara mari yese yekutumira yakaitika Inoda inofungidzirwa ne20 €.
8. Chigadzirwa Waranti
Rwemutemo musimboti wechivimbiso (Mutemo 23/2003, waChikunguru 10, pazvivimbiso muKutengesa Kwezvinhu zveVatengi) zvinoda kupa Mutengi nzira dzakasiyana dzekuda kuchengetedza hutsanana kana iye awana zvakanaka zvisingaenderane nechibvumirano, zvichimupa sarudzo yekuda kugadziridzwa kana kutsiviwa kwezvakanaka, kunze kwekunge zvisingaiti kana kushatisa. Kana iyo yekugadzirisa kana yekutsiva isingaiti kana isina kubudirira, mutengi angade kudzikiswa kwemutengo kana kubviswa kwechibvumirano. Zvigadzirwa zvacho zvine warandi wemakore maviri kubva pazuva rekutumirwa kwekutumirwa. Vagadziri vezvigadzirwa ndivo chete vane basa rekusimbisa uye inopa inodiwa hunyanzvi uye shure-kwekutengesa rutsigiro. Kana mutengi aine chero dambudziko rechigadzirwa, tapota taura neTechnical Rubatsiro Service (SAT) yakatarwa nemugadziri wega wega.
Nekuda kweizvi, Lasers-Pointers.com ichapindura kune Mutengi wekushomeka kwega kwega kuripo panguva yekutumira kwezvakagadzirwa zveodha, zvinonzwisiswa sezvinhu zvekushandiswa kwepachivande.
Kuvimbiswa kweLasers-Pointers.com mwedzi mitanhatu seyo Mugovanisi, mushure memwedzi mitanhatu kubva pazuva rekuraira garandi inopihwa zvakananga nemugadziri. Lasers-Pointers.com kana ikatadza chimwe chezvigadzirwa izvi zvichapa mutengi kero yemugadziri kuti atumire zvimwe chete pakugadzirisa kana kutsiva. Iko kurasikirwa kwekudzoka uku kunotakurwa nemutengi mune chero mamiriro ezvinhu.
· Kana kuremara kukauya pachena mumwedzi mitanhatu yekutanga kubva mukutakura kweiyo yakanaka, zvinofungidzirwa kuti anomaly yakatovapo paakazvitenga uye mutengi haafanire kuratidza chero chinhu.
· Nekudaro, iko kushaiwa kwekuzvifananidza kuchizviratidza mushure memwedzi mitanhatu uye mune kusahadzika mhaka, mugadziri anogona kuda yakazvimirira nyanzvi rondedzero kuongororesa garandi. Mune zviitiko zviri pachena zvekusashanda zvakanaka kana kushanda zvisina kukodzera pasi pe waranti nguva haina dambudziko.
Chero zvazvingaitika, panguva iyo mutengi achinyimwa chigadzirwa inomiswa kuwerengerwa kwenguva yevimbiso; Semuenzaniso, kana kugadziriswa kwechinhu kuchingotora mazuva gumi nemashanu, nguva yewarandi ichaguma mazuva gumi nemashanu apfuura pane yekutanga yakarongwa.
Kuti urarame nechivimbiso ichi, Mutengi anofanira kubata Lasers-Pointers.com nekutumira e-mail kune kero info@lasers-pointers.com umo icharatidza: zita remuridzi invoice, nhamba yekuraira, nhamba Invoice uye chikonzero chekusaenderana.
Kana iwe uchida kutitumira chigadzirwa chako kuti tiongorore, iyo kero yekutumira ichapihwa. Mari yekutumira ichaendeswa nemutengi. Padivi pechinhu chakakanganisika chinofanira kusanganisira kopi yekutenga invoice uye chibvumirano chewarandi chakasainwa nemazvo neTechnical Support. Mushure memazuva manomwe kubva kumutengi wevatengi kuenda kuLasers-Pointers.com, kana chigadzirwa chisati chagadziriswa uye chakapihwa munzvimbo inoratidzwa neTechnical Support, dhipatimendi redu harizobvuma chikumbiro ichi uye rinodzima chikumbiro chakabviswa chero mhando ye Warranty pamagetsi. Kana chikamu chakakuvadzwa chikagashirwa nekuda kwehurombo huripo, isu hatizotarisi kugadzirisa. Kuzivisa dambudziko kune mutengi uye kuigadzirisa zvakananga nemutengi uye mutengesi wekutakura. Chero chinhu chipi zvacho chisingaenderane nehunhu izvi chinotumirwa kudzoserwa kwauri, kunyangwe zvinhu zvacho zvichienderana nezvimwe zvikamu zvewarandi. Kana ukasarudza nzira isina kutumirwa yekufambisa uye ipaketi yakakanganisika, mutengi achazvidavirira pakurasikirwa kwacho.
- Maitiro echivimbiso.
A) Kana iko kugamuchirwa kwechigadzirwa kukaratidza kuti kukuvadzwa kwakafukidzwa nemamiriro ewarandi, kana yakagadziriswa kana kutsiviwa ichadzoserwa kumutengi pasina mari.
· Gadzirisa kana kutsiva. Chinhu chekutanga kuita kutumira icho chigadzirwa kuti chigadzirise kana kuchinjana neimwe chitsva. Sarudzo yacho inozorora kumutengesi, uyo achazofunga pamusoro pechisarudzo chemari yakasarudzika: kana mumwe wavo asiri mumwe kune mumwe, mutengesi anogona kusarudza zvakanakira kune zvavanofarira, chero bedzi musingafungiri zvakakura Zvikanganiso. Muchiitiko icho chinyorwa ichocho chisipo, shanduko mune yakaenzana kana yakakura bhenefiti chinyorwa ichaitwa, nguva dzose ichizivisa uye zvisati zvagamuchirwa, uye zvichizikanwa kuti chikumbiro chemutengi hachina kuenderana, sezvakaratidzwa muMutemo 23/2003. yaChikunguru 10 yeVimbiso muKutengesa Kwezvinhu Zvevatengi (BOE kwete. 165 ye 11-07-2003)
· Kuderedzwa kwemutengo kana kubviswa kwechibvumirano. Kana zvisingaiti (kana zvinonzwisisika) kutsiva chigadzirwa neimwe nyowani, kana iyo yekugadzirisa kana yekutsiva isingashande kusiya chigadzirwa mumamiriro ezvinhu ekuenderana, kana nguva yenguva yakanyanyisa ... mutengi anogona kusarudza pakati pekubvunza yekudzikisa mutengo Kana kumisa chibvumirano (sekureba sekushaiwa kwekuenderana kwakakosha). Mukuwedzera, mutengi ane kodzero yekubhadharirwa kukuvadza.
Lasers-Pointers.com nekuda kwezvikonzero kunze kwekambani, haina kuzvipira kuendesa kune chigadzirwa chinonzi chakatemerwa nguva, kuve nguva yakadai seinodzvanywa nemutengesi kana mugadziri, izwi richave richinyatso kutaurwa kune mutengi kuburikidza netsamba .
Iyo yekudzosera kutumira ichaitwa neyakajairwa tsamba, ichiita kuti mutengi ave nebasa rekupererwa, kukuvadzwa kana kurasikirwa, kana ikasarudza kutumira yakadhindwa inishuwa uye nekukurumidza inokwanisa kusarudza kudzoserwa neyekutumira nhume, inofanirwa kubhadhara 3 €. Mari iyi ichabhadharwa nekutumirwa kubhengi.
B) Kana kugamuchira chigadzirwa kuchiratidza kuti michina inoshanda nemazvo, inodzoserwa kumutengi uye mutengi anofanira kubhadhara mari yekufambisa yakagadzirwa pamwe nekubata uye kutarisa mutengo, unofungidzirwa kuti huwandu hwenhamba gumi yegumi. Iyo yekudzosera kutumira ichaitwa neyakajairwa tsamba, mutengi ari kuita chero kurasikirwa, kukuvara kana kurasikirwa, kana uchida kutumira kutumira inshuwarheni uye nekukasira anogona kusarudza kudzoserwa nekutaura kutumira, achiwedzera huwandu hwe10 €, 3 € mukati zvese. Mari iyi ichabhadharwa nekutumirwa kubhengi.
C) Kana, kana wagamuchira chigadzirwa, kukundikana kwemidziyo kuwanikwa kuri kutyora mamiriro ewaranti, waranti ichave yakafambiswa. Chinhu ichocho chinodzoserwa kumutengi uye chinofanirwa kubhadharwa mari yekufambisa inogadzirwa pamwe nekubata nekutarisa madhiri, akafungidzirwa kune huwandu hwese hwemari gumi. Iyo yekudzosera kutumira ichaitwa neyakajairwa tsamba, mutengi ari kuita chero kurasikirwa, kukuvara kana kurasikirwa, kana uchida kutumira kutumira inshuwarheni uye nekukasira anogona kusarudza kudzoserwa nekutaura kutumira, achiwedzera huwandu hwe10 €, 3 € mukati zvese. Mari iyi ichabhadharwa nekutumirwa kubhengi.
Kana kutumira kweiyo chigadzirwa kuchinge kwawongororwa, mari inofungidzirwa ye5 € inoenderana nekushanduka chero kero kana chigumbu, kungave kuri kwekukumbira kwemutengi kana nekuti ikaratidzirwa zvisiri izvo mumarongero, inotakurwa nemutengi.
Kana pakeji ikadzoswa nekero isiriyo, kuve usipo, usingaunganidze kana kuramba, mutengi anozoziviswa kana tachigamuchira muhofisi medu zvekuti anosarudza kuita nazvo. Kana iwe uchikumbira kutumira nyowani unofanira kubhadhara 5 € semutengo wekutakura. Zvinotora mwedzi kubva pane ziviso pane yedu chikamu kubvumirana kugadziriswa, mushure menguva ino pasina mhinduro ichaonekwa yekuzvidza kutenga nekutora zvinyorwa zvako uye huwandu hwakabhadharwa navo.
- Waranti yekudzima.
Hapana mhaka dzevimbiso dzinozogamuchirwa kana zvigadzirwa zvisati zvashandiswa zvisirizvo kana kwete maererano nehunhu hwavo neMutengi.
Zvigadzirwa zvacho hazvisi zvechirango nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
· Kushandiswa zvisiri izvo, kudzvinyirira kana kugadzirisa neCustomer yechigadzirwa kana chinhu.
Zvipenga zvinopiswa nemagetsi surges kana kuwandisa.
· Akaputswa kana kukuvadzwa zvikamu pasi pesimba.
· Kukonzeresa zvisiri izvo, kuchinjiswa nemutengi wechikwata.
· Kuora, kubvisa kana kuvanda nemutengi weLasers-Pointers.com vimbisa chitaura kana mugadziri wezvigadzirwa zvese (zvinosanganisira mafaera ane nhamba dzesainzi uye zvisimbiso zvekuchengetedza).
· Kukanganisa kunoitika semhedzisiro yekushandisa zvisirizvo kana kunze kwezvakatemerwa mamiriro ekunze, kuremara mukuisirwa, kana kupfeka uye kubvarura nekuda kwekujairika kwekushandisa kwemidziyo.
· Kuparadzwa kunokonzerwa nenjodzi dzakadai semoto, mafashamo, mhepo, kudengenyeka kwenyika kana dutu.
· Aesthetic kana yakarukwa inokuvadza mune epurasitiki zvinhu zvakadai Casings.
· Kuparara kunokonzerwa nemigumisiro nemamwe zvinhu, inowira, kupera kwemvura kana kunyura mumvura.
· Kutadza semhedzisiro yemanyorero nevatambi vasina kubvumidzwa, pamwe nekushandurwa kwakatevera kana kuwedzeredzwa kusingawanikwe mune yekutanga gadziriro.
· Zvikanganiso zvine chokuita nemaitiro ekugadzirisa kana zvikamu zvisina kukodzera.
· Zvinotengwa zvikamu, senge bhatiri. Iko kuderedzwa kwehupenyu hwebhatiri nekuda kwekudzokororazve kubhadharisa / kuburitsa maitiro kunoonekwa seyakajairwa.
· Kuparara kwepabhiri, kushungurudzwa, kushandiswa zvisina kunaka kana kusakarurama.
· Kuora mwoyo kwekushandiswa kwechinyakare.
· Chero kukuvara kana kukuvara kana iyo serial nhamba uye barcode chinyorwa chechigadzirwa kana chero chimwe chezvinhu zvacho chakagadziridzwa, kubviswa kana kubviswa.
9. Kodzero yekuregera
Mutengi ane mvumo yekubvisa iyo oda mukati memazuva gumi nemana ebhizinesi kubva mukutora gwaro, sezvakatsanangurwa muChinyorwa 14 cheMutemo 44/7, waNdira 1996, paRetailing.
Mutengi anofanira kuzivisa Lasers-Pointers.com ne e-mail (info@lasers-pointers.com) mukati memazuva gumi nemana. Nenzira iyi Mutengi anogona kuziviswa nezve maitiro ekudzosa iyo kodhi (nhamba yekudzoka, nzira yekutumira uye kero yekutumira).
Zvese zvinhu zvinotengeswa zvinofanirwa kudzoserwa mumapakeji ayo epakutanga zvisina tsarukano, mune yakakwana uye pasina kubhuroka. Mutengi anofanira kutora uye kutora matanho akakodzera ekudzivirira uye kurongedza kwechigadzirwa kuti atumirwe kunzvimbo dzedu dzinochengeterwa zvinhu. Kana zvisina kudaro Lasers-Pointers.com inochengetedza kodzero yekuramba kudzoka.
Kunze kwenguva ino, hapana kurudziro yekuraira kuchazogamuchirwa, kana kutumira kugoverwa kwezvinhu zvakagadzirwa zvinoenderana nezvitaurwa zveMutengi kana zvakasarudzika zvakajeka, kana izvo, nemasikirwo azvo, hazvigone kudzoserwa kana kuti zvinogona kuvhiringidza kana kupera nekukurumidza; Uye zvikumbiro zvekupa zvinyorwa zvevhidhiyo kana mavhidhiyo, ma disc uye software zvakavhurwa neMutengi, pamwe nemafaira emakombiyuta, anopihwa nemagetsi, achikwanisa kuridzwa kana kuburitswa nekukasira kuti ushandise zvachose. Kana pakeji ikadzoswa zvisiri izvo kana kuti zvisina kukwana, mutengi anozoziviswa kana tachigamuchira muhofisi yedu kuitira kuti asarudze chaanoda kuita nacho. Iwe uchave nemwedzi mumwe kubva pane ziviso nesu kuti ubvumire kugadziriswa, mushure menguva ino pasina kupindurwa kuchaonekwa kuti anozvidza kutenga uye anosiya zvinyorwa zvake uye huwandu hwakabhadharwa kwavari.
Mutengi uyo anotakura zvakananga mutengo wekudzosera chigadzirwa kuLasers-Pointers.com. Chete muchiitiko icho chinodzoka chechikanganiso chekutakura kana zvimwe zvinokanganisika kwatiri isu tichava nehanya nemutengo wekutakura. Isu hatigamuchire chero kudzoka kune yekutakura zvinhu nekuda. Mutengi achange ane mhosva kune chero kukuvara kunokonzerwa panguva yekufambisa yekudzoka muchigadzirwa. Kudzoka kunofanirwa kuendeswa kunzvimbo mukati memazuva gumi nemana kubva musi wekugamuchirwa kwekudzoka. Zvikasadaro icharambwa ndokudzoserwa.
Kana Mutengi achinge abvumidza kodzero yekubvisa kana kodzero yekubvisa, kana akangogashira zvinhu nekuratidza kuti zviri mumamiriro ezvinhu Lasers-Pointers.com achasungirwa kudzorera mari inobhadharwa neMutengi pasi pemubhadharo wekutakura, kubhadhara. makomisheni, Kudzorera mutengo wakadai sebhangi kubhadharisa uye michina yekugadzirisa inofungidzirwa pa 10 €. Kudzoserwa kwemari idzi kunoitwa nekukurumidza uye, mune chero zvakadaro, mukati menguva yakareba yemazuva makumi matatu kubva mukubviswa kana kugadziriswa.
10. Zvinangwa zvemutengi
Verenga yazvino General Mamiriro ezvinhu usati wanyoresa semutengi.
Remekedza Nyaya Dzose pakarepo kana mutemo uchigamuchirwa.
Bhadhara mitengo yakabvumirana panguva yekuisa urongwa.
11. Zvinangwa zveLasers-Pointers.com
Nunura chigadzirwa mumamiriro akanaka panzvimbo yakatumirwa yekutumira.
Remekedza mutengo wemirairo unobvumirwa panguva yekupedza iyo yakafanana.
12. Kodzero dzeVatengi
Gamuchira zvigadzirwa zvinogadzira urongwa hwako hwakakwana.
13. Lasers-Pointers.com Kodzero
Gamuchira kubhadhara kwemirairo.
Shandura mitengo yakatarwa muWebhu yako zvigadzirwa.
Shandura nguva yekutumira yezvigadzirwa zvichienderana nekuwanikwa kweiyo imwechete.
Kanzura kuraira kwekusabhadhara neMutengi.
Cancel yeWebhu pasina chiziviso chisati chaitika.
Nechinangwa chekuzivisa, zvikumbiro uye zvinyorwa chero zvipi zvinounzwa nechibvumirano ichi, Lasers-Pointers.com ichanzi ndiyo kero inoratidzwa mune aya maGeneral mamiriro.
15. Kuvimbika kwematare
Kunyangwe kana chirevo chechibvumirano ichi kana chimwe chezvikamu zvacho chisingashandi kana kuti chisina basa, mamwe ese magamu kana zvikamu zvawo zvinoramba zvichishanda uye zvichikosha.
16. Inoshandiswa mitemo
Aya Maitiro Ekare anotongwa nemitemo yazvino yeSpain, uye zvakananga ne: Civil Code, Mutemo 26/84 wa June 19 General YezveDziviriro yeVatengi uye Vashandisi, Mutemo 7/98 waKubvumbi 13, General Mamiriro Ekutora, Mutemo 7 / 96 ya15 Ndira paOrdinance yeRetail Trade, Directive 2000/31 EC yeEuropean Paramende uye yeChunga musi wa8 June, Mutemo 34/2002 wa 11 Chikunguru paRuzivo Society Services neElectronics Commerce, Mutemo 23/2003 waChikunguru 10. , Guaranteed pane Kutengesa Kwevatengi Zvigadzirwa uye mirau inovakudziridza.
Izvi zvinotevera Mitemo Yekushandisa yeWeLasers-Pointers.com Webhu saiti:
Kushandisa iyi webhusaiti uye / kana kunyoresa sewe mushandisi inofanidza kugamuchirwa kweiyi Mitemo yekushandisa uye iyo General Mamiriro Ezvibvumirano.
2. Muridzi wewebsite ino
Iyi webhusaiti inowanikwa neLasers-Pointers.com Kese kodzero yezviri mukati, mifananidzo, zvinyorwa, dhizaini uye software ndiyo pfuma yeLasers-Pointers.com.
Zvese zvinhu zvewebsite ino, zvinosanganisira zvisina muganho, dhizaini yayo uye zvirimo zvakachengetedzwa nemitemo yeInternational Property, Industrial Property nezvibvumirano zvepasi rese zvine chekuita nePopira.
3. Kushandisa Content
Kunze kwekunge zvakanyatso bvumidzwa neLasers-Pointers.com, iwe haugone kubereka, kutumira kana zvimwe kushandisa zviri mukati mewebsite iyi chero nzira.
Kunyangwe Lasers-Pointers.com ichiita zvese zvainoita kuti ive nechokwadi nekuita uye zvakona zvemukati webhusaiti iyi, inogona kunge iine zvikanganiso kana zvisiri izvo. Nekuda kweizvozvo isu hatipe vimbiso yekusimbisa, kuvimbika kana chokwadi chezvinoonekwa zvemukati.
Lasers-Pointers.com inoregedza mhosva yemashoko ari muchitatu rechitatu mawebhusaiti akabatanidzwa nezvisungo, neLasers-Pointers.com Webhusaiti.
Mumamiriro ezvinhu hapana Lasers-Pointers.com ichave ine mhosva kune chero kukuvara kana kukuvara kwe chero mhando inobuda kunze, kana maererano, kushandiswa kwe webhusaiti iyi.
Iwe unofanirwa kukoshesa Lasers-Pointers.com kutarisana nekukuvara chero kupi kunokonzerwa nekutadza kwako kutevedzera aya mamiriro kana kushandiswa kwezvinhu zviri webhusaiti izvi usati watendera mvumo.
Kana chero kupihwa kwemamiriro ezvinhu aripo kuchishayiwa kana kusashanda kana kusakwanisa kusimbiswa pasi pemutemo unoshanda, kupihwa kwakadaro hakuna chingaitika, asi kungosvika pakusakwana kwechokwadi, uye hakuzokanganisa chero humwe hurongwa hwePresent mamiriro.
6. Mutemo uye simba rinoshanda
Iyi General Mamiriro ezvinhu anofanirwa kududzirwa uye anotongwa nemanje Spain mutemo. Chero kukakavara kunobva kune aya mamiriro ezvinhu kunofanira kugadziriswa mumatare eToledo, Spain. Nekudaro, izvi hazvidzivirire Lasers-Pointers.com kubva mukushandisa kodzero yekugadzirisa chero litigation mune imwe inokwanisa kutonga.
Lasers-Pointers.com inochengetera kodzero yekuchinja zvirimo webhusaiti ino chero nguva uye musati maona chiziviso.
8. Nzvimbo yakachengeteka yakajeka zvakakwana
Organic Law 15/1999, yaDecember 13, Dziviriro Yeyako data. Iyo yega data inounganidzwa ichave inoenda kumagetsi ekugadzirisa uye inoiswa mune data mafaera aLuis Corraliza Sánchez, iri kuitisa basa rekuchengetedza kwayo uye kushandiswa kwayo.
Mutengi anovimbisa kuti iyo Dzivo data yakapihwa kuLasers-Pointers.com yakarurama uye ine basa rekutaura chero shanduko mavari. Iye muridzi we data anogona kushandisa kodzero dzekuwana, kugadzirisazve uye, zvazvingaite, kudzima nekutumira e-mail ku: info@lasers-pointers.com
Lasers-Pointers.com iri kambani inoshanda zvakananga neinotungamira laser pointers mafekitori pasi rese, achitendera isu kupa iyo yakasimba kwazvo laser pamutengo wakanaka.
100mW Lasers Anonongedza
200mW Lasers Anonongedza
300mW Lasers Anonongedza
500mW Lasers Anonongedza
+ 1000mW Lasers Anonongedza